Soomaali maxay ka baran kartaa midawgii Jarmalka? – Dawladnimo News
Home » Wararka » Bariga Afrika » Soomaali maxay ka baran kartaa midawgii Jarmalka?
Soomaali maxay ka baran kartaa midawgii Jarmalka?
Markii uu dhammaaday dagaalkii 2-aad ee dunida wixii reer galbeedku ugu yeeri jireen, dalweynihii Jarmalka waxaa loo qaybiyey labo waddan oo la kala baxay bari iyo galbeed bal se ku mideysan weli magaca Jarmal.Waxaa qaybiyey awoodihii hardamayey ee shuuciyadda Ruushka iyo Socialism kii reer galbeedka. Bariga Jarmalka waxaa uu xulufo la noqday dhinaca Ruushka waxaana ka hirgalay nidaamkii Marxismka ama shuuciga, halka galbeedku raacay awooddii reer galbeedka ee Dimuqraadiyadda iyo Socialismka!
Galbeedka Jarmalka waxaa ka hana qaaday dowladnimo furfurnaan leh, doorashooyin iyo horukac dhaqaale, halka barigu liitay dhaqaale ahaan iyo dowladnimo ahaanba. Dadkii ku noolaa bariga Jarmalku waxa ay bilaabeen in ay u tahriibaan galbeedka Jarmalka iyaga oo nolol iyo shaqo raadis ah, waxa ayna soo mari jireen dalka Hungry maadaama Baarliin la kala qaybiyey oo darbi u dhaxeeyey.
Ugu dambayn 1989-kii waxaa bilowday kacdoonno iyo dibad baxyo looga soo horjeedo xukunkii shuuciyadda laguna dalbanayo in dib loo mideeyo awooddii saqiirtay ee Jarmalka wayn **Great Germany**. Waxaa la sheegaa bannaanbaxyadaas in ay ka qaybgaleen dhowr malyan oo Jarmalka bari dadkii ku noolaa ah. Ugu dambayn Raysalwasaarihii ayaa iscasilay waxaana la doortay Egon Krenz in uu marxalladda adag ka saaro waddankaa. Waxaa uu u duulay Magaalada Moosko, halkaana waxa uu kula soo kulmay madaxweynihii midowga Soofiyeed. Waxaa uu u sheegay “dadka Jarmalku waxay doonayaan awooddii waynayd ee Jarmal iyo midnimadii luntay ee walaalahood”. Markii uu soo laabtay waxaa uu ku dhawaaqay in dadka Jarmalku isu gudbi karaan, in la jabiyo darbiga Baarliin. Waxaa lagu heshiiyey 10 qodob oo kuwa ugu muhiimsan ahaayeen in doorashooyin guud dalka laga hirgeliyo, la na mideeyo labada dal. Doorashooyinkii dhacay xisbiigiisa waa looga adkaaday, wuu aqbalay, waana iscasilay!
Soomaaliya waxa ay u baahantahay awood shacab oo mideysan oo siyaasiga ku khasabta go’aamo adag. Ogow siyaasi wax ma mideeyo, waxna ma qaybiyo badanaa ee waxaa wax qaybiya shacabka iyaga ayaana midooba!
W/Q Ali Ahmed Haji Ali